1. क्रिसमस, वर्षको अन्त्यको रमाइलो मौसम जब चिसो जाडोमा क्रिम्प भइरहेको छ। आज हामीसँग मिठाई मेनू छ। यसले हाम्रो परिवारमा खुशी, रमाईलो र न्यानोपन थप्नेछ। सम्पूर्ण परिवारको साथ मिलेर स्वादिलोपन प्राप्त गर्न सक्षम एक सुन्दर वातावरण र सम्झना, बनाउन को लागी सजिलो, स्वादिष्ट स्वाद र उपकरणहरू तयार गर्न सजिलो सिर्जना गर्न। सामान्यतया विस्फोटक तातो चकलेट बनाउने विधि, सरल तर स्वादिष्ट सामग्रीको साथ सुपरमार्केटहरूमा फेला पर्दछ • चकलेट (गाढा, दूध) २०० ग्राम • मार्चमेल्लो १०० ग्राम resh ताजा दूध (पिउँदा पिउँदा) १ कप तयार छ, तातो चकलेट बमको साथ जाऊँ।
2. फोकाबाट कम आँचमा चकलेटलाई पिघलाउनुहोस्। यो चकलेट सजिलैसँग पग्लनको लागि यसलाई भाँच्नुहोस् वा सानो टुक्रा पार्नुहोस्।
3. एक सिलिकॉन मोल्ड तैयार गर्नुहोस्, अनसाल्डेड बटर वा जैतुनको तेलको १ राउन्ड, मोल्डमा उमालेको चकलेट राख्नुहोस्। र लगभग १० मिनेट को लागी फ्रिजमा राख्नुहोस् चकलेटलाई क्युबमा चिसो दिन र हामीले छनौट गरेको ढाँचाको आकार अनुसार आकार दिन। यो सामान्यतया गोलाकार प्रिन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। किनकि तपाईं गिलास राख्न सक्नुहुन्छ र एक राम्रो गोलो सर्कल देख्न सक्नुहुन्छ
4. जब चकलेट आकारमा हुन्छ अनप्र्याप गर्नुहोस् र फ्रिज गर्नुहोस्। त्यसपछि मोल्ड बाहिर लिनुहोस्, सफा गर्नुहोस् र चकलेट थप गर्नुहोस् र राशि पर्याप्त नभएसम्म जारी राख्नुहोस्।
5. जब चकलेट सख्त हुन्छ र सन्तोषजनक नम्बर पाउनुहोस् बीचमा मार्समेलो राख्नुहोस्। त्यसपछि शीर्ष र तल चकलेट स्यान्डविच बाँकी चकलेटको साथ स्प्लिट राउन्ड बन्द गर्नुहोस्। एक सुन्दर गोल आकार मा Sculpt र यसलाई फेरि फ्रिजमा राख्नुहोस्, सजिलो र सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, केटाकेटीहरू मनपर्दछ र उनीहरूको परिवारसँगै गरेका गतिविधिहरूको आनन्द लिन्छन्, पाठ्यक्रम, कसरी सजिलै तातो चकलेट बमहरू बनाउन सकिन्छ, महत्त्वपूर्ण छ, कसैले पनि यसलाई गर्न सक्दछ, तर प्रक्रिया अझै सकिएको छैन। यसलाई हेरौं कसरी यो खाने र यो क्रिसमस र नयाँ वर्षको मौसममा मीठापन र न्यानोपन थप्नको लागि।
6. तातो चकलेट बम कसरी खान सकिन्छ
7. हामीले तयार गरेका चकलेट बमहरू भन्दा ठूलो सुन्दर मग तयार गर्नुहोस्। यदि क्रिसमस वातावरण प्राप्त गर्न ताजा हरियो, चम्किलो रातो, वा गिलास छनौट गर्नुहोस् जुन चाडको प्रतीक हो। त्यसो भए ताजा दुधलाई कम तातोमा उमालेर, दूध नआउन्जेल सम्म नउठ्नुहोस् र तातो धुवाँले नछोड्नुहोस्। तातो दूधलाई चकलेट बमको गिलासमा राख्नुहोस्। तातो दूध चकलेट बिस्तारै पग्लिनेछ र पिउँदा गन्ध आउँछ। सुगन्धित दूध चकलेटको मीलो स्वादको साथ मिश्रित। जब एक चम्मच खाने मार्शमैलोहरूले मीठो स्वाद देखाउँदछ। र नरम र चीउ स्वाद प्रत्येक शब्दमा न्यानो भावना दिन्छ
8. सब भन्दा राम्रो उपहार प्रेम, न्यानोपन, र परिवार उपस्थिति हो। छुट्टीमा सँगै रमाइलो गतिविधिहरू गर्नुहोस् मीठो गन्ध सम्झनाहरु बनाउने तातो चकलेट ब्लास्ट कसरी बनाउने सकेसम्म लामो रूपमा आनन्दको क्षणहरू रेकर्ड गर्न